Wave Money Bot for Facebook Messenger - ChatBottle
Wave Money ဆိုသည်မှာ တယ်လီနော နှင့် ရိုးမဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်သော အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနီးအနားရှိ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် Wave ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် လွယ်ကူ၊ လျင်မြန်စွာ ငွေလွှဲ၊ ငွေလက်ခံနိုင်စေပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့များအား ရပ်တည်မှုပိုမိုခိုင်မာစေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လူနေမှုဘ၀ကိုမြှင့်တင်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်စေခြင်းတို့ကို အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Wave Money ဆိုသညျမှာ တယျလီနော နှငျ့ ရိုးမဘဏျတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ ငှလှေဲပွောငျးနိုငျသော အဆငျ့မွငျ့နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါသညျ။ အနီးအနားရှိ ယုံကွညျစိတျခရြသညျ့ Wave ဆိုငျကိုယျစားလှယျမြားမှတဈဆငျ့ လှယျကူ၊ လငျြမွနျစှာ ငှလှေဲ၊ ငှလေကျခံနိုငျစပေါသညျ။ အသငျးအဖှဲ့မြားအား ရပျတညျမှုပိုမိုခိုငျမာစခွေငျး၊ မွနျမာနိုငျငံသားမြား၏ လူနမှေုဘဝကိုမွှငျ့တငျခွငျး နှငျ့ နိုငျငံစီးပှားရေးတိုးတကျစခွေငျးတို့ကို အတူတကှပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားပါမညျ။
Wave Money -ajoint venture between Telenor and Yoma Bank - is an innovative way to transfer money.
Wave Money offer you fast and easy way of sending and receiving money through our trusted neighborhood Wave Shops.
Together, we will empower communities, improve people's life, and help grow the country's economy.
#software #advertising/marketing #workplace & office #app page #product/service
Software Advertising/Marketing Workplace & Office App Page Product/Service
Explore 1 Software chatbot templates for Messenger on the Botmakers marketplace
Vote for Wave Money